करेन्ट लागेर दुबै हात र खुट्टा गुमाएका कृष्ण ओलि भेट्न सहयोग लिएर पुगे भाइरल मुना मगर र लाहुरे (भिडियोसहित) – PathivaraOnline
Home > समाचार > करेन्ट लागेर दुबै हात र खुट्टा गुमाएका कृष्ण ओलि भेट्न सहयोग लिएर पुगे भाइरल मुना मगर र लाहुरे (भिडियोसहित)
करेन्ट लागेर दुबै हात र खुट्टा गुमाएका कृष्ण ओलि भेट्न सहयोग लिएर पुगे भाइरल मुना मगर र लाहुरे (भिडियोसहित)
admin January 8, 2019 समाचार	0
काठमाडौं। सुन्दा र हेर्दा निकै दुख लाग्ने यो घटना । कति सम्म निर्दयी हुने रहेछ दैब पनि । आफुले काम गरेर पैसा कमाएर बर्षौ माया गरेर बिहे गरेको श्रीमतिलाइ स्टाफ नर्स बनाउछु भनेर पैसा कमाउन आफ्नै देशमा बिजुलिको काम गर्दै आएका कृष्ण ओलि को यथार्थ घटना हो यो । कृष्ण भन्छन मलाइ मारिदिको भए पनि हुने थियो आखिर बाचेर पनि केही गर्न सक्दिन यद्यपि आँखाबाट झरेका मेरा यी पानी जस्तै आसुहरु पुछ्न पनि सक्दिन ।
म यतिमै खुसी छु कि मलाई आफ्नो ज्यान भन्दा नि धेरै माया गर्ने श्रीमति ( रुपा ) पाएको छु । उनको यो साहस देखेर मेरो पनि हिम्मत बड्छ । धेरै मिडियाले अन्तरबार्ता लिने क्रममा पछिल्लो समयमा निकै भाइरल हुँदै आएकी लोक दोहोरी छेत्रकै होची गायिका मुना मगर र उनी सङ्गै भाइरल भएका लाहुरे एकैसाथ कृष्ण लाई भेटन पुगे ।
उनिहरु दुई निकै भावुक भए । यस्तो पीडा देख्दा कस्को आँखा नरसाउला र ! उनिहरुले भने : सारा नेपाली हजुरको साथमा छ । कहिले पनि हार नल्हानु । यति धेरै माया गर्ने तपाइको श्रीमति को साहसले गर्दा सारा नेपालिको मन जितिरहनु भयको छ भन्दै केही रकम सहयोग गरे ।
हे भगवान कस्तो दर्दानाक अवस्था यो ? ८० बर्षको उमेरमा पनि यस्तो जोखिम काम , आफ्नो दुख सुनाउदै डाको छोडेर रोए (भिडियो सहित)
एचएको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तनाव – संघको माग सहित हेर्नुहोस
प्रधानाध्यापकले छात्रलाई सबैको अ’गाडि पा’इन्ट फु’कालिदिएर कु’टे, छात्रले गरे आ’त्मह’त्या
राजधानीमा सवारी गुडाउनेहरूका लागि यस्तो छ ट्राफिक नियम!